photo ကို Html ဘယ်လိုပြောင်းလဲ — MYSTERY ZILLION
photo ကို Html ဘယ်လိုပြောင်းလဲ
August 2009 edited August 2009 in Internet & Email
photo ကို Html ဘယ်လိုပြောင်းမလဲဆို တာ သိတဲ. သူ တွေက ဒီနေရာလေးမှာ ဆွေးနွေးပေးစေလိုပါတယ်။ကျွန်တော်သိတာကတော. photo ကို www.photobucket.com မှာ upload တင်ရုံနဲ. Html ပြောင်းပေးပါတယ်။ တခြားနည်းလမ်းသိတဲ.သူရှိရင်ပြောပြပေးပါနော်။
photo ကို html ဘယ်လိုပြောင်းမလဲဆို တာ
မေးခွန်းနားမလည်ဘူးဗျ။ ဘာကိုဆိုလိုချင်တာလည်း မသိဘူး။
ဟုတ်ပါတယ် ကျွန်တော်လည်း မေးထားတာကို သိပ်မရှင်းပါဘူး..ပြောချင်တာက
Photo ကို Website မှာထည့်ချင်တာလား..သေချာပြန်ပြောပြပါလား ဒါမှဘာဆိုတာနားလည်ပြီး
ascii art ကိုပြောတာလားမသိဘူး။ http://www.supercomm-shot2char.de/ သုံးကြည့်ပါလား။
photo ကို upload လုပ်တာကိုပြောတာထင်တယ်။ ကိုဝေယံပြောတဲ့ photobucket လိုပဲ တခြားကောင်းတာတွေ အများကြီးရှိပါသေးတယ်။
ဒီလို ပါ သေသေချာချာရှင်းပြရရင် ကျွှန်တော်ဆိုလိုတာ က ဂျီမေးကို အတက်ဖိုင် တွဲ တဲ. အခါ
ပုံ ကို အပ်လုပ်လုပ်တာ အရမ်းကြာတာ . အဲဒီတော. ပုံကို Html ပြောင်းပြီး ကုတ်တွေကို စာကိုယ်မှာ ရေးလိုက်တယ်။ပုံ ကို အဲဒီနည်းနဲ. ပို.ကြည.်တာ တော်ေတော်လေးအဆင်ပြေတယ်ဗျာ.
အဲဒီမှာ တခု ခက်တာ က ပုံတွေကို Html ကုတ်ပြောင်းဖို. က ပုံကို photobucket မှာ အရင် ဆုံး အပ်လုပ်တင်ရတယ်။ ကော်နက်ရှင်မကောင်းရင် အဲဒီလို ကုတ်ပြောင်းဖို.က ကို တော်တော်ကြာတယ်။
အဲဒီတော. ကျွန်တော်စဉ်းစားမိတာ က ပုံ ကို တခြားနည်းနဲ. ရော ကုတ်ပြောင်းလို. ရမရ.။
ဆိုလိုတာ က အင်တာနက်ကို မသုံးပဲ ပုံကို ကုတ်ပြောင်းလို.ရနိုင်ပါသလား။
ရတယ်ဆိုပါတော.။အဲဒီလို နည်းလမ်းကို ကျွန်တော်လို လူပြိန်းတယောက်ကရော ဒီမှာ ၀င်ဖတ်ရုံနဲ. လုပ်နိုင်လောက်ပါသလား။အဲဒါလေးကိုပြောပြပေးစေချင်လို.ပါခင်ဗျာ။
ကိုယ်သိချင်တာကိုတောင်လုံးစေ.ပတ်စေ. အားလုံးသဘောပေါက်အောင် မရေးနိုင်ကို ခွင်.လွတ်ပေးကြပါခင်ဗျာ။
အကိုပြောတာက လင့် (link)ကို copy paste လုပ် အိမ်ကိုသယ်သွားပြီး... အင်တာနတ်မရှိဘဲ website ကြည့်လို့ရလားလို့မေးသလိုဖြစ်နေတယ်.. အဲဒါ code ပြောင်းတာဟုတ်၀ူးဗျ.. လင့်ချိတ်လိုက်တာ ပီးတော့ အကို့ပုံက photobucket ရဲ့ဆာဗာပေါ်မှာတင်ထားတာလေ... အကို အီးမေးကနေပို့တယ်ဆိုတာကလည်း photobucket ရဲ့ link ကို body မှာထည့်ပေးလိုက်တာ... attached တွဲတာကြတော့ google server ကို upload တင်တာ.. တင်ရတာတော့တင်ရတာချည်းပါပဲ... အဲ... အဲဒီတော့အတိုပြောရရင် အင်တာနတ်မသုံးပဲ ပုံကို ကုတ်ပြောင်းလို့ရ၀ူးပေါ့ဗျာ... နားလည်ရဲ့လားသိ၀ူး.. ဟီး.. :P
ဒီလို ပါ သေသေချာချာရှင်းပြရရင် ကျွှန်တော်ဆိုလိုတာ က ဂျီမေးကို အတက်ဖိုင် တွဲ တဲ. အခါ ပုံ ကို အပ်လုပ်လုပ်တာ အရမ်းကြာတာ . အဲဒီတော. ပုံကို Html ပြောင်းပြီး ကုတ်တွေကို စာကိုယ်မှာ ရေးလိုက်တယ်။ပုံ ကို အဲဒီနည်းနဲ. ပို.ကြည.်တာ တော်ေတော်လေးအဆင်ပြေတယ်ဗျာ. အဲဒီမှာ တခု ခက်တာ က ပုံတွေကို Html ကုတ်ပြောင်းဖို. က ပုံကို photobucket မှာ အရင် ဆုံး အပ်လုပ်တင်ရတယ်။ ကော်နက်ရှင်မကောင်းရင် အဲဒီလို ကုတ်ပြောင်းဖို.က ကို တော်တော်ကြာတယ်။ အဲဒီတော. ကျွန်တော်စဉ်းစားမိတာ က ပုံ ကို တခြားနည်းနဲ. ရော ကုတ်ပြောင်းလို. ရမရ.။ ဆိုလိုတာ က အင်တာနက်ကို မသုံးပဲ ပုံကို ကုတ်ပြောင်းလို.ရနိုင်ပါသလား။ ရတယ်ဆိုပါတော.။အဲဒီလို နည်းလမ်းကို ကျွန်တော်လို လူပြိန်းတယောက်ကရော ဒီမှာ ၀င်ဖတ်ရုံနဲ. လုပ်နိုင်လောက်ပါသလား။ အဲဒါလေးကိုပြောပြပေးစေချင်လို.ပါခင်ဗျာ။
နည်းနည်းတော့ သိလာသလိုပဲ။ ကိုယ်သုံးမယ့်ပုံကို ပထမဦးဆုံး upload လုပ်လိုက်တယ်။ အဲဒီအခါ ကိုယ့်ပုံရှိနေတဲ့ နေရာကို link ပြန်ပေးတယ်။ အဲဒီ link ပြန်ပေးတဲ့ဟာကို ပြောတာနဲ့တူတယ်ဗျ။
ဥပမာ ဒီလိုမျိုးကိုပြောတာ မဟုတ်လားဗျ။
ဒီလိုlink ရဖို့က upload လုပ်မှရမှာပါ။ လုပ်ကို လုပ်ရမှာပါ။ အပေါ်မှာ ကိုwinlwin ပြောတဲ့နေရာတွေမှာလည်း upload လုပ်လို့ရပါတယ်။ အမေးတခြား အဖြေတလွဲ ဖြစ်နေရင်တော့ Sorry ပါဗျာ။ အဆင်ပြေပါစေဗျာ။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ပြန်ဖြေတာကို ဖတ်ပြီးမှ ကိုယ်.မေးခွန်းကို ရှက်လိုက်တာဗျာ:p:p။တကယ်တော. ကျွန်တော်က ကွန်ပျုတာဗဟုသုတ အရမ်းနည်းတယ်။အင်တာနက်ဗဟုသုတ ရော။:d:d:d:d အခုလိုစိတ်ရှည်လက်ရှည်ရှင်းပြပေးတာကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ပို.တင်ပေးတာ မကြာသေးဘူး။
ချက်ချင်းလောက် နီးနီး အားတက်သရော ဖြေပေးကြတာ ကျေးဇူးအရမး်တင်ပါတယ်။
mz ဖိုရမ် ဟာ ကျွန်တော်တို. လို လက်သင်လေးတွေအတွက် အားကိုးလောက်တဲ.ဖိုရမ်ကြီးပါခင်ဗျာ။
နောက်လည်း မသိတာရှိရင် လွပ်လပ် စွာပို.တင်ပြီးမေးခွင်.ပြုပါခင်ဗျာ။